MKV waa qaab weelka ay ku jiraan kartaa video, audio, Cinwaan iyo macluumaad kale ah. Haddii MKV videos aad mar hore ku jira track Cinwaan, had iyo jeer waxa aad tusi karto in ciyaaryahanka warbaahinta socon KMPlayer ama VLC Media Player. Laakiin haddii aad aad video MKV iman mayso file subtitles, waxaad u baahan tahay inaad subtitles daro in aad MKV video hore. In tutorial this, laba hab oo lagu bilaabaa inuu kaa caawiyo inaad subtitles daro in movie MKV aan ka kaaftoomi kasta.
Qaybta 1aad: Sida loo dar fur-in subtitles in aad hadda jira filimada MKV
Qeybta 2: Edit iyo dar subtitles kuu gaar ah si ay u movie MKV ah
Qaybta 1aad: Sida loo dar fur-in subtitles in aad filimada MKV jira
Tutorial Tani waxay ku tusi doona sida subtitles in lagu daro in MKV video la Wondershare Video Converter Ultimate . By isticmaalaya Cinwaan si video Converter, si aad u MKV video waayo biirtay galay file video ah oo lagu ciyaaro kombiyuutarka, qalab iyo YouTube ku dari kartaa subtitles, ama gubanaya si DVD inay ku raaxaystaan ​​on TV.
Ka hor inta aadan bilaabin in ay ku tusaan sida loo subtitles daro in MKV video, ka eeg waxa qaabab video iyo qaabab Cinwaan waxaa taageera, si aad u hesho iyaga diyaar. Wixii soo degsado subtitles, halkan waxaad booqan kartaa wixii faahfaahin ah oo dheeraad ah.
Video qaabab : MP4, AVI, MKV, wmv, Mpg, MPEG, VOB, TOD, mod, FLV, iyo dhammaan qaabab video joogto ah.
Hadda socdaan iyada oo loo marayo tallaabooyin fudud si ay u subtitles daro in MKV video.
Talaabada 1: Import videos MKV ku darto subtitles
Ka dib markii ay ku rakiban Cinwaan si MKV Converter (Windows 8 taageeray), waxay u ordaan oo dajiyaan aad MKV video by jiidayeen video in daaqadaha hoose, ama adigoo gujinaya "Add Files" badhanka si ay u helaan MKV video daaqad popup caleenta ah.
Tallaabo 2: Ku dar Cinwaan in MKV video
Marka videos MKV ayaa dejinta in daaqadaha hoose, xaq waxa guji ka mid ah liiska iyo dooran "Edit" doorasho in la furo suuqa kala video tafatir ah. Tag "Cinwaan" tab ugu sareysa, oo waxaad ku shuban kartaa files Cinwaan dibadda (ama .srt, .ssa, ama file .ass magaca kordhin) adigoo gujinaya "+" button. Ka dib markii Cinwaan waxaa ku raran yihiin, oo aad horay u on video MKV waxaa ka arki kartaa waqtiga isagoo qaar ka mid ah Cinwaan. By default, waxaa loo isticmaali doonaa qaab la eego. Si kastaba ha ahaatee, adigoo fursad u "T" ka sokow, aad astaysto Cinwaan by font, midabka, size, booska, hufnaan, iyo wixii la mid ah. Marka aad ku qanacsan tahay Cinwaan MKV ah, riix batoonka "OK" si loo xaqiijiyo goobaha.
Fiiro Gaar ah : Waxa kale oo aad ku dari kartaa watermark, dalban saamaynta, iyo video dalagga uu furmo suuqa kor ku xusan video tafatirka.
Talaabada 3: Dhoofinta MKV video ama in DVD gubi MKV la Cinwaan
Hadda waxa la joogaa wakhtigii inuu ku soo shirtagi Cinwaan in MKV video joogto ah. In sidaa la yeelo, doortaan qaab saarka la doonayo adigoo gujinaya liiska "Qaabka Output" hoos-hoos dhinaca midig. Dhammaan qaabab video caanka ah waxaa taageera, oo ay ku jiraan MKV, MP4, AVI, MOV. Waxa kale oo aad si toos ah u dooran kartaa qalab ah si loo badbaadiyo MKV video la Cinwaan inuu u ciyaaro qalabka (sida iPhone, iPod, iPad). Haddii aad rabto in aad ku gubi MKV in DVD la Cinwaan, aad leedahay si ay dajiyaan files ee "Guba" interface ee bilowgii. Markii wax walba waa diyaar, guji "Beddelaan" ama "Guba" badhanka si ay u bilaabaan diinta. Subtitles ayaa si joogto ah la dhoofiyo doonaa in video ah qaab cayiman.
Bravo! Iyadoo Video Converter (Windows 8 taageeray), waxaad ku dari kartaa subtitles in MKV video loogu daawashada ku computer, qalab ama TV.
Fiiri talaabada talaabo video hoos ku tutorial,
Dad badan ayaa jeclaan lahaa in ay ogaadaan sida ay u abuuraan subtitles ay afka ay doonayaan oo way gubi doonaan in videos MKV. Dhab ahaantii, waxa ay u adag tahay haddii aadan qabin editor xirfadle subtitles sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ) ee gacanta. Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa hantida text hodan si aad u xusho, oo kuu ogolaanaya inaad si dheeraad ah u astaysto mowqifkeeda, font, midabka, libdhi ku / libdhi baxay saamayn, iwm Download tijaabo ah oo lacag la'aan ah ka hooseeya iyo hubi sida loo sameeyo tallaabada tan talaabo.
Hoos hage qaadataa shaashada Windows si ay u sharxaan sida ay u shaqayso. Haddii aad socda Mac ah, waxa kale oo aad kala socon kartaa isku tallaabooyin. Laakiin hubiso in aad hesho version saxda ah ee nidaamka hawl gal ka dhigi.
Talaabada 1: dejinta aad MKV video
Burcad barnaamijkan, dooro "16: 9" ama "4: 3" muuqa, waxaad u timid doonaa xagga daaqaddii aad u dareen hoose, tusi sida belows. Si aad u dajiyaan ilaha movie AVI, guji "Import" xitaa folder file aad kombiyuutarka ama si toos ah jiidi AVI videos aad ay suuqa kala hoose. Ayaa ku raran yihiin video clips ku tusi doonaa sida thumbnails in shayga saxaarad bidix. Marka aad ku darto files oo dhan, jiididda iyo iyaga hoos u ka mid Timeline video ah oo ay ka mid.
Fiiro gaar ah: The files ee Jadwalka Video isugu biireen aan joogsiga kasta doonaa.
Talaabada 2: in MKV video fudayd dar subtitles
Guji "Text" tab kor ku Timeline, oo ay doortaan template ah oo aad jeceshahay in aad isticmaasho in aad subtitles tafatirka. Waxaa jiid meeshii aad rabto. Marka ay yimaadeen meeshii, waxaa jiri doona a thumbnail qoraalka "T" oo muujinaya in Timeline Qoraalkii. Double u riix si aad u muujin deegaanka tafatir ah, ka dibna la bedelo qoraalada kuu gaar ah, bedesho muuqaalkiisa sida font, midabka, zoom dhigay gudaha / dibedda saamayn, iyo in ka badan. Waxa kale oo aad qabsato karaa muddada file ay si hagaagsan aad video waayo, markay soo laabtay suuqa kala hoose.
Talooyin: Waxaad riix kartaa icon Play in waqtiga dhabta ah ee loo kontoroolo waxtarkii wax soo saarka, iyo sidoo kale qabsato Zoomer Timeline ka Mozilla gudaha / dibedda Timeline si aad u ogaato meesha aad si fudud u doonayaan.
Talaabada 3: badbaadi abuurkiinna
Waxaad tahay oo keliya mid ka mid click iska si ay u gubaan subtitles si aad filim MKV. Hit "Abuur" si ay u helaan suuqa kala soo saarka, ka dibna soo qaado qaab aad rabto in aad u badbaadin on desktop. Sidoo kale, waxaad si toos ah ayaa gubi kara DVD disk ah ka MKV video si ay u daawadaan cozily on your TV shaashad ballaaran.
> Resource > Video > Sida loo dar Cinwaan in MKV Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)